Ceni: “Tsy misy kandidàm-panjakana” | NewsMada
Ceni: “Tsy misy kandidàm-panjakana”
Par Taratra sur 15/04/2019
“Manamafy ny didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara fa tsy maintsy hajaina ny tsy fiandaniana sy ny tsy fitanilan’ny fitondran-draharaham-panjakana. Tsy fiandaniana sy ny tsy fitanilana amina kandidà mirotsaka amin’ny fifidianana izany, na amina hevitra tohanana amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny hoe fisian’ny olom-panjakana manao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana na miandany amina kandidà solombavambahoaka amin’izao fotoana izao. Noho izany, tsara ny manamafy fa tsy misy ny hoe kandidàm-panjakana.
Tsy mahazo manohana kandidà na mitaona olona hanohana kandidà ny mpikambana rehetra eo anivon’ny fitondran-draharaham-panjakana. Eo anivon’ny governemanta ka hatrany amin’ny sampandraharaham-panjakana eny ifotony izany. Tsy misy ihany koa kandidà mirotsa-kofidina afa-milaza fa kandidàn’ny fitondram-panjakana.
“Noho izany, mamerina ny fampahatsiahivana izahay eo anivon’ny Ceni fa voasazin’ny lalàna ny hetsika rehetra ahitana taratra izay fiandanian’ny fitondran-draharaham-panjakana izay amin’ny kandidà iray na fikambanana kandidà amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao”, hoy izy.
Tsy tokony hiasa intsony ny mpiasam-panjakana kandidà
“Mbola misy ireo mpiasam-panjakana mitana andraikitra eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana maro manerana an’i Madagasikara mbola manohy ny asany ihany, na efa nambaran’ny Ceni aza fa kandidà amin’ny fifidianana solombavambahoaka”, hoy ihany izy. Asa izany, na noho ny antony tsy fahalalana na manao fanahy iniana?
Nampahatsiahiviny àry fa ireo rehetra mpiasam-panjakana na mpiasa eny anivon’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana rehetra efa nekena ho kandidà amin’ny fifidianana solombavambahoaka, efa tsy tokony handray ny asany intsony nanomboka ny 19 marsa lasa teo, nanambarana ny lisitry ny kandidà ofisialy, hatramin’ny 27 mey hanatanterahana ny latsa-bato.